Isu tiri mumutsetse uyu kwemakore gumi nemasere, makumi maviri neshanu zviitiko zvekugadzira. Aivigirwa kune nyika dzinopfuura makumi masere, 90% dzokorora odha.
Zvese zvigadzirwa ndezvekudya giredhi, izvo zvinokodzera sekuenderana neInternational standard.
Chikwata chedu chekugadzira chaigona kupa zvinhu zvitsva mwaka wega wega kunyangwe mwedzi wega, saka isu tinotarisira kutora zvimwe zvinhu zvitsva uye kubatsira kuhwina bhizinesi redu tese. Nemakore gumi nemasere eruzivo mukugadzira uye kushambadzira mukombe, vashandi vese, nekuda kwenyika-ye-iyo-yehunyanzvi michina yehunyanzvi, vakazvipira kugadzira zvigadzirwa zvemhando dzakatsiga kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vedu kubva pasirese. Isu tinotevedzera uzivi hweMutengi kutanga kushandira vatengi. Tikugashirei kumubvunzo wako uye kugona kwedu uye nehunyanzvi zvichaita kuti unakirwe nebasa nesu.
Sravana Sameeralu Serial 4th Technology-Isu tinopfuurira mune hunhu hwezvigadzirwa uye nekudzora zvakanyanya maitiro ekuburitsa, akazvipira kugadzirwa kwemarudzi ese.
Zvakanakira-Zvigadzirwa zvedu zvine mhando yakanaka uye kiredhiti kwatiri kuti tigone kumisikidza akawanda mahofisi ebazi uye vanogovera munyika medu.
Sevhisi-Kunyangwe iri pre-sale kana mushure-kutengesa, isu tinokupa iwe neakanakisa sevhisi kukuzivisa iwe uye kushandisa zvigadzirwa zvedu nekukurumidza.
Chinangwa chisikwa-Iyo kambani inoshandisa epamberi dhizaini masisitimu uye kushandiswa kwepamberi ISO9001 2000 yepasi rose mhando manejimendi manejimendi manejimendi manejimendi manejimendi.
Unhu hwakanaka-Iyo kambani inoshanda mukugadzira michina yemhando yepamusoro, yakasimba simba rehunyanzvi, kugona kwakasimba kugona, akanaka masevhisi masevhisi.
Strong technical timu--Isu tine yakasimba timu yehunyanzvi muindastiri, makumi emakore ehunyanzvi ruzivo, yakanakisa dhizaini dhizaini, ichigadzira yepamusoro-soro yepamusoro-inoshanda smartequipment.